SIDEE LOO KAYDIYAA TUFAAXA GURIGA SI SAX AH? - WIXII MARTIDA
Doorashada meel ama sida loo kaydiyo tufaaxa guriga dhexdiisa?
Xilliga dayrta ama dhexda jiilaalka kristantineed, waa wax fiican in la raaxaysto Midhaha xagaaga oo aad u fiican - ku neefso tufaaxa tufaaxa ee dhadhamiya.
Inkasta oo maanta aysan jirin wax yar - waxaad ka iibsan kartaa alaab laga soo bilaabo adduunka oo idil sanadka oo dhan - gaar ahaan dhadhan fiican oo soo jiidasho leh Tufaaxyada ayaa u muuqda in si shakhsi ah loo goostay, ka dibna la qalajiyey iyaga gacanta.
Ma aha in la sheego faa'iidada caafimaad iyo ecological nadiif ah sida doorasho. Waxaad ku ogaan kartaa sida aad u sameyso miraha qalalan ee tufaaxa naftaada boggeena.
Si raaxo leh si joogta ah kuugu farxaan ilaa xagaaga soo socda, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad raacdo xeerarka kaydinta fudud. Waxay isaga u badbaadin doonaan miiska miisaankeena iyo kharribaadda cayayaanka haraaga ah. Sidee loo kaydiyaa tufaaxa guriga?
Goob sax ah
Sidee loo xafidaa tufaax qalabka guriga ah iyo meesha? Gurigeena ma aha saldhig qudaar ah: aqalka heerkul aan joogto ahayn ku habboon alaabooyinka ka fiican dadka Nidaamyada hawo-mareenka adag iyo qashinka waaweyn ee hermetic, laakiin tufaax qalalan ayaa aan qabyo ahayn waxayna ku faraxsan yihiin inay noqdaan badi qoyska.
Sidaa darteed, keydinta tufaaxa guryaha guriga ayaa ku talinaysa in waxaad mar walba heli kartaa meel ku haboon iyo baakadka saxda ah ee waxyaabaha caadiga ah.
Waa maxay qaabka ugu fiican ee lagu kaydin karo tufaaxa?
Tufaaxyada, kuwaas oo horey u soo jiidanayay qorrax aad u badan, ha u dulqaadan nalka qaabka la qalajiyey - waxay yihiin si fiican loogu keydiyo meel mugdi ah.
Aad u fiican, haddii ay tahay sidoo kale hawada ka bax - waxay badbaadin doontaa badeecada ka samaysan caaryaal mana u ogolaan doonto inay noqoto mid joogta ah.
Xulo baakadaha aad u baahan tahay si taxadar leh: haddii ay tahay dabacsan - lix lugood oo tuugo ah ayaa u kici doona farqiga, iyo weelka "dhegaha" oo dhan, sida boorso caag ah ama weel caag ah, ugu dambeyntii joojin doono hawada.
Kadibna badeecadda ayaa bilaabi doonta "gariir", "dhididka", " waxaa lagu dabooli doonaa caaryo iyo wax khasaaro ah. Waxay si fiican uga badbaadsan tahay karbaashkan wuxuu ku duubay ama ku duubay warqad lagu dhajiyay hoose ee dukaanka: dambiilaha, sanduuqyada kartoonada, dhalooyinka ama sanduuqyada.
Hal dheeraad ah lakabka waraaqahaWixii ilaalin wanaagsan, oo ku darsamay tufaax sare. Meeshii mugdiga ah ee laga goosto dalagyada la qalajiyey, waxaa la gelin karaa baaquli kale oo cusbo ah - waxay kaloo kaa caawin doontaa inaad la dagaalanto qoyaan xad dhaaf ah.
Waa inaad xasuusnaataa!
Sidee loo kaydiyaa tufaaxa guriga? Sidaas awgeed, waa inay noqotaa madow, quruxsan qalalan iyo hawo qallalan. Guryaha waxaa ku yaala dad badan: maskaxda, qolalka, qolalka.
Waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in tufaaxa si fiican u nuugaya ur iyo si aysan u urin wax kale oo ka baxsan beerta dacha iyo xagaaga macaan, waxaa ka wanaagsan in laga saaro kiimikooyinka iyo fooxa jikada.
Guri-joogtu waxay badanaa ku kaydisaa tufaaxa qalabka guryaha. Aad u haboon in aad midho u qaloocan u hesho: si joogto ah u baahan tahay inuu kormeero siidaynta wakhtiyada cayayaanka ah iyo raadadka cayayaanka la soo weeraray.
Xilliga fasaxa nolosha macaan, marnaba ma dareemi doontid inaad ku biirto shilinta, dhiqlaha iyo aboorada, si aad u xiiso badan.
Xilliga diiran waxaad ku haysan kartaa raaxo. balakoonka.
Ku filan waxaa halkaa jooga. dabaysha dabiiciga ah, laakiin khatarta ka imanaysa qoyaanka xad-dhaafka ah iyo dulin-ku-socodka dabiiciga ah ayaa kordhaya - buugga waa in la baaraa marar badan.
Sida loo ilaaliyo tufaaxa guriga? Kaydinta ku habboon waxay ku lug leedahay ma aha oo keliya ilaalinta guud ee miro la qalajiyey, laakiin sidoo kale Jawaabta wakhtiga ah on caqabadaha duruufaha.
Tufaaxyada qalalan waxay heli karaan qoyaan, lix-lugood oo marmar ah waxay maraan marxaladda wareegga qalabka ilaalinta. Waa wax aan macquul aheyn in lagu kalsoonaado xaaladaha noocaas ah - wax walba waa la saxi karaa. Tufaax qamri mar kale ayaa la qalajin karaa foornada.
Kaliya haddii geedi socodka uu aad u fogaaday oo kalkaaliyana uu qaatay fursadda, ku guuleystay, haddii tufaaxa la tuuro - caafimaadku waa qaali.
Waxay kaloo caawisaa cayayaanka foornadalaakiin wuu la qabsan doonaa dhaxan - Tufaaxa waa in la geliyaa qaboojiyaha wakhti gaaban ama la keeno balakoonka, weerarka ayaa la soo celin doonaa. Heerkulka ka hooseeya toban caws iyo digirta ay u dhintaan.
On si habboon u kaydiso tufaax qalajin guriga, waxaad ka baran kartaa fiidiyowga:
Sida loo ilaaliyo tufaaxa qalajinta ee kaabajka, ka akhriso boggayaga internetka.
Miraha qalalan ee tufaaxa faa'iido leh, dhadhan fiican leh oo lagama maarmaan ah ee cuntada. Way fududahay in lagu diyaariyo guriga, labadaba gudaha iyo qalabka guriga. Waxay si buuxda u ilaalinayaan walxaha waxtar leh, ka badbaadinta avitaminosis jiilaalka iyo si fiican u xoojinta difaaca jirka.
Waxaa ku jira iyaga iodiin, waxay xoojisaa maskaxda, taas oo faa'iido u leh professor iyo ardayda, fadhiga qaboobaha.
Waxaa jira sabab kasta oo lagu soo saaro sheygan, gaar ahaan maaddaama ay tahay qof walba awoodiisa inuu ku hayo guriga.
Ku filan si aad u muujiso wax yar sadaqo iyo fasaxa xagaaga ee dhadhanka wanaagsan looma joojin doono jiilaalka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Wixii martida 2020